Ogaden News Agency (ONA) – Dowladaha Deeqda Bixiya ee UK iyo USA oo lagu eedeyay inay indhaha ka qabsadeen balaayooyinka ay Dowlada Ethiopia kawado dalkaas
Dowladaha Deeqda Bixiya ee UK iyo USA oo lagu eedeyay inay indhaha ka qabsadeen balaayooyinka ay Dowlada Ethiopia kawado dalkaas
Posted by ONA Admin	/ April 16, 2013
Ururka Survival ayaa dhaleeceyn usoo jeediyay haayadaha dowliga ah ee mucaawamada siiya Ethiopia oo ay ku sheegeen inay indhaha ka xidheen musiibooyinka iyo halaaga dowlada Ethiopia kawado wadankaasi.
Haayada Survival waxay canbaareyntan si toos ah ula beegsadatay Haayda DFID iyo USAID oo ay ku sheegeen in labadaas haayadood ee wadamada UK iyo USA sitoos ah uga-warhayaan musiibooyinka ka jira Ethiopia ee leh bara kicinta, xidhayga, balse indhaha ay xidheen. Labadaas dowladood oo ah kuwa mucaawamada ugubadan siiya wadanka Ethiopia waxay indhahooda ka dabooleen bara kicinta, xidhayga, dilka loo geysanayo qowmiyadaha daga Wabiga OMO. Warbixintan ay soo saartay Survival waxay si gaar ahaaneed daraasad ugasoo sameeyaan qowmiyadaha Mursi. Bodi iyo Kwegu oo ah qowmiyado ree guura ah oo ku nool agagaarka wabiga Omo islamarkaasna ah xoolo dhaqato.
Muuqaalkaas kore filimka waxaa ka hadlaysa haweenay kasoo jeeda qowmiyada Mursi oo ka sheekeynaysa dhibaatada ay soo gaadhsiyeen gumeysiga Ethiopia. Waxay sheegtay inay maalin u baxday beerteeda si ay usoo qaadato dalagi uga baxay (hadhuudh) beerteeda. Markii aan beerta kusii socday waxaan arkay dhulkii iyo geedihii oo lajaray oo wado cusub laga sameeyay. Hadii aan gaadhay beertaydi waxaan u tagay beerti oo la baa bi’yay keydkii dalagii nooyiilayna waxaa lagu shubay wabiga. wax aan smaeyn karay ma jirin sidaas daraadeed calool xumo ayuunbaan la ooyay. Eega wax raashin ah oo aan heysano ma jiro beerna ma heysti.
Wabiga Omo ayaa daafihiisa waxaa lagaa gaday shirkad lagu magacaabo Kuraz Sugar Project barnaamijka shirkadaas oo lagu wado in wabiga OMO biyihiisa oo dhan ay xidhaan islamarkaasna dhulka Omo river uu noqdo wabiga ugu weyn ee saxare laga dhigo iyada oo in kabdan 22 meter biyahiisa wabigaas hoos u dhici doono. Waxa arintan ay saameyn doonta kaluunka ku jira wabigaas oo dhiman doono islamarkaasna saameyn ku keeni doona dadkii ka kalumeysan jiray wabiga ee noloshoodu ku xidhnayd.
Sidoo kale waxaa laga raray dad kor u dhaafaya million badhkiis oo xoog looga raray daafaha wabiga OMO. Dadka ayaa dowlada Ethiopia waxa ay ku qasabtay inay xoolahooda sida adhiga iyo lo’da inay gadaan oo ay lasoo hadhaan dhowr neef kaliya. dadkiina waxaa lagu daabulay xero qaxoontiyo cusub oo loosameyay oo lagu sheegay dibu dajin tuuloyin cusub. Dadka waxaa loo sheegay in lasiin doono mucaawadada “Aid” ka loo yaqaano ee ay bixiyaan wadamada UK iyo USA haddii ay ogoladaan kaliya inay noloshooda ka tagaan oo ay tuuloyinkaas u guuraan, dadka kaliya ee tuuloyinka la dajiyay ayaana la siiyay mucawamadan cunada ah.
Gumeysiga Ethiopia mid lamid ah ololaha uu kawado Wabiga OMO, waxa uu ka bilaabay dhulka Ogadeniya isaga oo shirkado shidaalka ka qodo iyo dhulkaba kuwa xaalufiya ay iskudayeen waxaase hortaagan ciidamada JWXO oo u diiday in kheyraadka dhulkaas.